Safiirka Mareykanka ee Somalia oo ku wajahan Kismaayo – Bandhiga
Safiirka Mareykanka ee Somalia oo ku wajahan Kismaayo
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Amb. Donald Yamamoto ayaa saacadaha soo aadan ka degi doona garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee caasimada gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo uu wadahadallo kula leeyan doono madaxweynaha aan dowladda aqoonsaneyn ee maamulka goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Wararka ayaa sheegaya in wafdiga uu hoggaaminayo Safiirka Mareykanka ee arrimaha Soomaaliya, Axmed Madoobe ay kala hadli doonaan xaaladda cakiran ee Jubbaland, gaar ahaan xiisada maamulkaasi kala dhexeysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Sidoo kale warar ay heshay Idaacada Bandhiga ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka wada arrinsan doonaan xaalada wasiirkii hore ee amniga Jubbaland CabdiRashed Janan, oo hadda ku dhuumaaleysanaya xadka Kenya iyo Somalia wadaagaan.
Ammaanka Kismaayo ayaa sidoo kale maanta si aad ah loo adkeeyey, iyadoo qaban qaabadii ugu dambeysay ee loogu jiro soo dhoweynta wafdigaan laga dareemayo magaaladaasi.
Safarka Yamamoto ayaa ku soo aadaya, iyadoo haatan dhaq dhaqaaqyo u dhexeeya dowladda iyo Jubbaland ay ka socdaan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya.